Ninka lagu tuhmayo dilka xildhibaan David Amess oo noqday wiilka mas'uul xilal kasoo qabtay Soomaaliya - Caasimada Online
Home Warar Ninka lagu tuhmayo dilka xildhibaan David Amess oo noqday wiilka mas’uul xilal...
Ninka lagu tuhmayo dilka xildhibaan David Amess oo noqday wiilka mas’uul xilal kasoo qabtay Soomaaliya
London (Caasimada Online) – Warbaahinta dalka UK ayaa shaaca ka qaaday magaca ninka Soomaali British-ka ah ee lagu tuhmayo dilka xildhibaan David Amess oo Jimcihii lagu dilay toorey, deegaanka Leigh-on-Sea oo qiyaastii 65 km u jirta London.
Tuhmanaha ayaa waxaa lagu magacaabay Cali Xarbi Cali, waxaana dhalay Xarbi Cali Kulane oo xilal dowladeed kasoo qabtay Soomaaliya, sida ay qoreen Wargeysyada The Sunday Times iyo Daily Mail.
Xarbi Cali Kulane, wuxuu horey usoo noqday agaasimaha warfaafinta ee xafiiska ra’iisul wasaaraha ee xilligii Cumar Cabdirashiid. Wuxuu sidoo kale 2014-kii soo noqday wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee Galmudug.
Afhayeen u hadlay booliska Scotland Yard ayaa yiri “ayada oo qeyb ka ah baaritaanka, waxaan tagnay saddex guri oo ku yaalla hareeraha London oo aan baaritaano ka sameynay.”
Dhinaca kale, dambi-baarayaasha ayaa loo ogolaaday in illaa Jimcaha ay xabsi kusii hayn karaan Cali, ayaga oo aan dacwado rasmi ah kusoo oogin.
Sir David Amess ayaa kulan weji-ka-weji ah la lahaa dadka soo doorta, markii Cali Xarbi Cali oo dilka lagu tuhmayo, uu billaabay weerarka mindida oo ka dhacay magaalada Leigh-on-Sea, oo qiyaastii 65 km u jirta magaalada London.